ကြက်အူချောင်း နဲ့ ဆန်အိတ်တွေကို အိမ်ထောင်စု(၂၀၀)အတွက် ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Sinon Loresca – Suehninsi
အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို အမြဲကူညီပေးလေ့ရှိတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် Sinon Lorescaကတော့ ရောဂါကပ်လေးကြီးစကတည်းက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးနေသလို အစားအသောက်တွေလည်းချက်ပြုတ်ပြီး ပေးဝေနေခဲ့တာလည်းဖြဟ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း
မွန်းမြတ်အလှူလေးတစ်ခုအဖြစ် လိုအပ်နေသူတွေကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Sinon Lorescaဟာ ရောဂါကပ်လေးကြီးကြောင့် အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု(၂၀၀)ကို ကြက်အူချောင်းနဲ့ဆန်အိတ်တွေ
လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ခံရသောဒေသရှိမိသားစု ၂၀၀ အားဝက်အူချောင်းနှင့်ဆန်အိတ် ၂၀၀ ကိုဝေငှလှူဒါန်းခြင်း။ ဤသေးငယ်သောကြင်နာမှုလုပ်ရပ်ကသူတို့၏ဘဝအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားမာပါ။ Sharing
200 packs of sausages and rice to 200 families inapoverty-stricken area. This small act of kindness makesabig impact on their lives Thanks to ‘’ Daw Hla Tin Food Stuff Industry’’” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်
စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ Sinon ကတော့ Covid-19 ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ခံရသောဒေသရှိမိသားစု (၂၀၀)ကို ကြက်အူချောင်းနဲ့ ဆန်အိတ်(၂၀၀)သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။Sinon ရဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ အလှူလေးပြုလုပ်နေတဲ့ ဗီဒီဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။
အကူအညီလိုအပျနသေူတှကေို အမွဲကူညီပေးလရှေိ့တဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော Sinon Lorescaကတော့ ရောဂါကပျလေးကွီးစကတညျးက တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနကေူညီပေးနသေလို အစားအသောကျတှလေညျးခကျြပွုတျပွီး ပေးဝနေခေဲ့တာလညျးဖွဟျပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး
မှနျးမွတျအလှူလေးတဈခုအဖွဈ လိုအပျနသေူတှကေို ထောကျပံ့လှူဒါနျးလိုကျပွနျပါပွီ။ Sinon Lorescaဟာ ရောဂါကပျလေးကွီးကွောငျ့ အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ အခွခေံလူတနျးစားအိမျထောငျစု(၂၀၀)ကို ကွကျအူခြောငျးနဲ့ဆနျအိတျတှေ
လှူဒါနျးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “ဆငျးရဲမှဲတမှေုဒဏျခံရသောဒသေရှိမိသားစု ၂၀၀ အားဝကျအူခြောငျးနှငျ့ဆနျအိတျ ၂၀၀ ကိုဝငှေလှူဒါနျးခွငျး။ ဤသေးငယျသောကွငျနာမှုလုပျရပျကသူတို့၏ဘဝအပျေါကွီးမားသောအကြိုးသကျရောကျမှုရှိသှားမာပါ။ Sharing
200 packs of sausages and rice to 200 families inapoverty-stricken area. This small act of kindness makesabig impact on their lives Thanks to ‘’ Daw Hla Tin Food Stuff Industry’’” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ
စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ Sinon ကတော့ Covid-19 ရောဂါကပျဘေးကွီးကွောငျ့ ဆငျးရဲမှဲတမှေုဒဏျခံရသောဒသေရှိမိသားစု (၂၀၀)ကို ကွကျအူခြောငျးနဲ့ ဆနျအိတျ(၂၀၀)သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျတဲ့။Sinon ရဲ့ မှနျမွတျလှတဲ့ အလှူလေးပွုလုပျနတေဲ့ ဗီဒီဖိုငျလေးကို ပွနျလညျဝမြှေလိုကျပါတယျနျော။
Source : Sinon Loresca’s Facebook | Reference & Credit : Cele Gabar
မိုးတွေရွာနေတာတောင် အဓိဌာန် မပျက်အောင် မိုးကာအင်္ကျီဝတ်ပြီး မိုးရေထဲမှာ ဆက်လက်ကုသိုလ်ယူနေကြတဲ့ စမိုင်းလ်တို့ မိသားစု